इण्टरनेटबाटै सवारी चेक जाँच ! -
इण्टरनेटबाटै सवारी चेक जाँच !
तपाई गाडी चलाउँदै छन् अथवा गाडीको मालिक हो भने अब तपाईँ ट्राफिक पुलिसको आँखाबाट टाढा रहन सक्नेछैन । ट्राफिक पुलिसले यसका लागि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सुरक्षित यात्राका लागि ‘ट्राफिक कम्युनिकेशन एप्स’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
ट्राफिकले आफ्नो क्षमतामा विकास गरी डिजिटाइजेशन माध्यमद्वारा सवारी साधन र चालकलाई निगरानी गर्नेछ । यो एप्सले तपाईँले गाडी कति समय चलाए, चालक परिवर्तन गरे कि भएन भन्ने लगायत जानकारीसँगै चालकको तस्वीरसहितको सबै कुराको अभिलेख राख्नेछ ।
नियम पालना गरेको छैन भने एप्सले जानकारी दिनेछ र सोही आधारमा सवारी चालकलाई कारवाही गरिनेछ । यदि कारवाहीबाट बच्न तपाईँ चाहन्छ भने ‘ट्राफिक कम्युनिकेशन एप्स’को निर्देशन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्राफिक प्रहरीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ‘ट्राफिक कम्युनिकेशन एप्स’ आइतबारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
एप्स सञ्चालनमा आएसँगै लामो दूरीका सवारी साधनमा दुई चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई सुनिश्चित हुने विश्वास गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख अरुणकुमार पौडेलले अब सवारी चालकले नियम मिच्न नपाउने भन्दै यसले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहज हुने बताए । काशीराम शर्मा
← उत्तर कोरिया–अमेरिका शिखर वार्ताप्रति दक्षिण कोरियाली आशावादी
प्रदेश नं १ को राजधानी धनुकुटा बनाउनु पर्ने भन्दै धनकुटा बजार बन्द
१७ पुष २०७४, सोमबार गोक्यो संवाददाता 0
सरकारले तीन महिना भित्र नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा राजमुकुट सार्वजनिक गर्ने घोषणा